सार्वजानिक शौचालयप्रति महानगरको वेवस्ता, कति छन् सार्वजनिक सौचालय ? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
सार्वजानिक शौचालयप्रति महानगरको वेवस्ता, कति छन् सार्वजनिक सौचालय ?
२०७७ माघ १०, शनिबार १३:४१:००
पछिल्लो समयमा काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या करिब ५० लाख हाराहारीमा बसोबास गर्दै आएका छन्। तर, काठमाडौंमा बसोबास गर्ने मानिस सबै घर बस्दैनन् हिड्डुल पनि गर्छन्।
हिड्डुल गर्नेका लागि काठमाडौं उपत्यका भित्रमा के प्रयाप्तमात्रामा सार्वजानिक शौचालय होलान् जति छन् त्यो पनि प्रयोगगर्न लायकका छैनन्। केहीमा प्रयोगगर्ने पानी छैन, कुनैमा फोहोरले भित्र पस्नै मुस्किलको अवस्था छ।
त्यसैले काठमाडौं उपत्यकामा बस्ने अधिकांशले सार्वजानिक शौचालयको प्रयोगगर्दैन्। बरू, चियाखाने निहुँपारेर होटल पस्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ । किन सार्वजानिक शौचालय बनाउनका लागि सरकारले पहल गर्दैन। किन सरकारले सार्वजानिक शौचालयको विषययमा कुरा उठाउदै। सरकारले विकल्पमा महानगरपालिकाले स्मार्ट शौचालयको अवधारण ल्याएको छ । तर,स्मार्ट शौचालयको कुरा छौडौं भएकै अधिकांश शौचालयलाई सफा र मर्मत गर्ने हो भने धेरै ठाउँमा सुधार ल्याउन सकिने सार्वजानिक शौचालयको विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
भएका अधिकांश सार्वजानिक शौचालय चलाउने निजी संस्था महानगरपालिकाबाट कसरी पिडित छन् । महानगरले पिसाब फेरेको ५रूपैयाँबाट दिसागरेको १० रूपैयाँबाट उठाएको पैसा कसरी लिन्छ र त्यो प्रयोगमा महानागले चासो देखाउन सकेको छैन। काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सय दिनमा सय काम भनेर घोषणा गरेका मेयरले सार्वजानिक शौचालयको विषयमा कुनै गतिलो काम गर्न सकाका छैनन् ।
कति छन् त काठमाडौं उपत्यका भित्रमा शौचालयको अवस्था ?
काठमाडौं उपत्यका भित्रमा सार्वजानिक शौचालयको अवस्था कस्तो छ । हेरौं एक उदाहरण ः काठमाडौंमा जस्मा सार्वजानिक शौचालय नै भनिएर बनेको जम्मा ३८ वटा शौचालय रहेको छन । त्यस्तै मन्दिर क्षेत्रमा रहेका २२ वटा छन् भने सरकारी भवनमा ५ वटा पार्क यरीयमा रहेको शौचलयको संस्था भनेको जम्मा ७ वटा पेट्रेलपम्पमा क्षेत्रमा पर्ने ५६ वटा त्यस्तै व्यवसायीक भवनहरूमा १७ वटा रहेका छन् भने सरकारी र नीजि अस्पतालहरूमा ९ वटा गरेर जम्मा अनुमानित काठमाडौं उपत्यका भित्रमा १५४ वटा रहेको छ । त्यस्तै, ललितपुरमा सार्वजानिक शौचालयनै भनेर किटान गरिएका ११ वटा रहेका छन् धार्मिक स्थलहरूमा ५ वटा सरकारी भवनका शौचालय ८ वटा पार्कमा रहेका २ वटा पेट्रोल पम्प १८ वटा मल अथवा व्यवसायीक भवन ५ वटा र अस्पतालहरूमा ९ वटा रहेको छ ।
त्यस्तै किर्तीपुरमा, सार्वजानिक शौचालय नै भनेर किटान गरिएको १२ वटा धार्मिक स्थलहरूमा धार्मिक स्थलहरूमा ३ वटा सरकारी भवनमा १ वटा ,पार्क क्षेत्रमा रहेको शौचालय ३ वटा छन् भने पेट्रोल पम्पमा २ वटा व्यवसायीक भवन १ वटा रहेको छ भने जम्मा किर्तीपुर क्षेत्रमा २६ वटा छन्। मध्यपुर ठिमीमा सार्वजानिक शौचालयनै भनेर ६वटा धार्मिक स्थलमा ५ छन् भने पेट्रोल पम्प क्षेत्रमा ८ वटा गरी जम्मा १९ वटा रहेका छन् ।
जम्मा काठमाडौं, किर्तीपुर मध्यपुर ठिमीगरी जम्मा २ सय ४९ वटा मात्र सर्वधारणले प्रयोगगर्न मिल्ने शौचालयहरू छन् ।
किन हल हुन सक्दैन सार्वजानिक शौचालयको समस्या ?
सार्वजानिक शौचालयमा मुख्य समस्या भनेको भएकै सार्वजानिक शौचालय पनि सफा छैनन् । सरकारी निकायभित्रकै शौचालयपनि कतिपय सफा हुन्न भने सार्वजानिक शौचालयको समस्या सफाहुन नसक्दा भएकै शौचालय पनि कामै नलागनाे अवस्थामा पुग्न पुगेका छन् । अर्को मुख्य समस्या भनेको नयाँ सार्वजानिक शौचालय बनाउनका लागि टेन्डर पक्रिया नै झन्झटीले बन्ने गरेको छ ।